PressReader - Ilanga: 2017-11-02 - BAFUNA AJEZE ABAZALI OWOMSUBELO
BAFUNA AJEZE ABAZALI OWOMSUBELO
Ilanga - 2017-11-02 - Izindaba - PAMELA ZUNGU phumelela@ilanganews. co.za
BADINWE bagana unwabu abazali babafundi baKwaSithebe Primary School, KwaSithebe eMandeni, ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal mayalena nezinsolo ezimbi ngothisha osolwa ngokufunza umfundi wakwaGrade 6 umsubelo ( phambi kwabanye abafundi kufundwa.
Lesi sigameko kuthiwa senzeke ngaphambi kokuba izikole zivalelwe isigaba sesithathu sonyaka.
ILANGA libike ngomfundi wesilisa oneminyaka eli12 ubudala - esiligodlile igama lakhe ukuvikela isithunzi sakhe - okuvele ukuthi uyinto yokugcakela kulo thisha esingeke simdalule, njengoba evame ukuhlekisa ngezicathulo nomfaniswano wakhe.
Lo thisha kuthiwa ubengagcini ngokuhlekisa ngomfaniswano walo mfundi kodwa ubephinde ambize ngemfene ehlala nezinkawu kubo. ILANGA lithole ukuthi abazali babhodla umlilo njengoba befuna ukuba lo thisha ajeziswe.
Omunye umzali ongathandanga ukudalulwa igama, uthe kakumele abafundi bahlukunyezwe ngalolu hlobo esikoleni.
“Singabazali sifuna ukuthi izinyawo zigcwale udaka kulo thisha ngoba akwenze kulo mfundi kakunambithiseki futhi umehlise isithunzi.
“Into esicika kakhulu wukuthi uthishanhloko akalusukumelanga ngani lolu daba. Sinxusa umnyango wezemfundo ukuba wenze okufanele ngalo thisha ukuze uzothumela umyalezo oqinile nakwabanye abacanga ukwenza into efuze le,” kusho lo mzali.
Uthi bayisa izingane ezikoleni ukuba ziyofunda hhayi ukuyohlukunyezwa ngalolu hlobo.
“Umfundi makangenziwa inhlekisa ngokuhlupheka kwakhe, kakusilo iphutha lakhe ukuthi kubo kudliwa imbuya ngothi. Kumele ngabe lo thisha uvikela umfundi hhayi amenze ihlaya phakathi kwabanye abafundi,” kusho lo mzali.
UMnu Kwazi Mthethwa okhulumela uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, ucele umphakathi ukuba wehlise umoya futhi ubekezele njengoba umnyango uzobhekana nothisha kanzima.
“Ngifuna ukucacisa ukuthi kasinazo izilwane emagunjini okufundela, ukhona umnyango ubhekelela izilwane.
“Siwumnyango sithanda ukuxolisa kumfundi, umzali nomphakathi ngesenzo sikathisha.
“Sifuna kube khona ofakazi bengane nabakathisha njengoba kuphenywa,” kusho uMnu Mthethwa.